Dambiyada Al-shabaab ay ka gashay Dalka iyo Diinta-DHAGAYSO – Radio Muqdisho
Dambiyada Al-shabaab ay ka gashay Dalka iyo Diinta-DHAGAYSO
Maleeshiyada Alshabaab wali kama daalin daadinta dhdiigga dadka Soomaaliyeed. Qaraxii jimcihii tagay kooxdu ka geysatay masjid ku dhex yaalla Central Hotel, ayna ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad badan oo salaad Jimce tukanayay, ayaa bulshada Soomaaliyeed dib u xasuusiyay xasuuqyo hore oo ay kooxdu horay u geysatay sida kii Hotel Shaamow, Hotel Muna,Hotel Madina Beledweyn iyo tacadiyo kale oo aan wali ka go’in xusuusta bulshada Soomaaliyeed.
Haddaba barnaamijka Tubta Toosan ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa dambiyada kooxdu ka geysatay dalka iyo waxa ay ka qabto diinta Islaamku, waxaana barnaamijka noogu marti ah Sheikh Cabdullaahi Axmed Garruun. Qeybta hoose ka dhagayso barnaamijka oo dhammaystiran.
Boliiska Koonfur Afrika oo ka hadlay dhibaatada Soomaalida ku haysata Koonfur Afrika